Apple waxay sii deyneysaa filimkii ugu horreeyay ee luminta Alice ee soo baxa dhammaadka Janaayo Waxaan ka socdaa mac
Apple waxay marhoreba diyaarisay taxanaha cusub ee dhagarta iyo xiisaha nafsiga, luminta Alice. Mabda 'ahaan iyo haddii wax waliba hagaagaan, Musalsalka ayaa soo bixi doona 22-ka Janaayo ee sanadkan hadda ayaan bilownay. Tixdu horey ayey u leedahay xayeysiiska kanaalka rasmiga ah ee Apple waxaad ku leedahay Youtube. Is kululeysa hordhaca.
Goor dhow waxaan heli doonnaa horudhaca taxanaha cusub ee Apple ee loo dejiyay nolosha Alice, door ay ciyaartay Ayelet Zurrer oo ku waashay Sophie, oo ah qoraa 24 jir ah, oo uu jilay Lihi Kornowski. Kani waa taxane yar oo telefishan Israel ka kooban oo ka kooban 8 cutub, iyo in Apple ay soo saari doonto hal toddobaad kasta. Ugu dambeyntiina, shaqadii dib u bilaabatay Juun 2019 way dhammaatay.
Si aad afkaaga u kala qaaddo, Apple ayaa soo saartay trailerka ka taxanaha ah kanaalka rasmiga ah ee shirkadda ee Youtube. Muuqaal kooban oo kayar laba daqiiqo. Sawirro buuxa oo diiradda saaraya halyeeyada iyo inay dareemeyso inay luntay kadib markay korisay qoyskeeda.
Safar shaleemo xiise leh oo adeegsada dib uxirid iyo toos-u-socodsiinta sheeko murugo leh oo qancineysa taasoo daawadayaasha u marineysa miyirka iyo miyir-qabka maskaxdiisa. Musalsalku wuxuu daba socdaa Alice (oo ay jileyso Ayelet Zurer), oo ah 48 jir agaasime filim ah, oo dareentay inaanay khusayn tan iyo markii ay korisay qoyskeeda. Kadib kulan kooban oo tareenka dhexdiisa ah, wuxuu ku waashay haweeney dumara oo 24 jir ah, Sophie. Ugu dambeyntii wuxuu ka tagayaa sharaftiisa anshax si uu u gaaro awood.
Qoraalku waa mid xiiso leh gaar ahaan joogitaanka Lihi Kornowski, oo ah atariisho weyn oo waliba ka soo muuqatay filimada sida Daredevil ama Man of steel. 22 ku xigta, waxaan leenahay taariikh Apple TV + (Waxaad horeyba u ogayd inaad kaga raaxeysan karto adeeggan inta badan qalab kasta oo aad guriga ku haysato, TV caqli badan Konsol... iwm) si ay ugu raaxeysan karaan jilaayaashooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Apple waxay sii deyneysaa filimkeedii ugu horreeyay ee loo yaqaan 'Losing Alice' kaasoo soo baxa dhammaadka Janaayo